Suuqa xakamaynta gelitaanka amniga Shiinaha-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Suuqa xakamaynta gelitaanka amniga Shiinaha
Waqtiga: 2021-01-04 Hits: 15
Horumarinta dhaqaalaha adduunka, dadku waxay si aad ah uga walaacsan yihiin xakamaynta helitaanka amniga iyo arrimaha amniga, iyo suuqyada warshadaha amniga adduunka ayaa sidoo kale si xawli leh u socda. Farqiga sii ballaaranaya ee u dhexeeya hodanka iyo saboolka ayaa sababay heerka dambiyada ee dalalka soo koraya inuu kordho, iyo baahida loo qabo amniga iyo alaabada lagu xakameeyo helitaanka ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay. Isla mar ahaantaana, nidaamyada xakamaynta helitaanka amniga ayaa si ballaaran looga isticmaalay dawladaha, shirkadaha, warshadaha, kiimikada kiimikada, gawaarida, dhismaha maraakiibta, maaliyadda, isbitaalada, milatariga iyo warshadaha kale. Laga soo bilaabo 2007, Shiinaha wuxuu noqday suuqa labaad ee ugu weyn adduunka xagga amniga marka laga reebo Mareykanka.
Waxaa saameeyay jahwareerka dhaqaale ee adduunka qeybtii labaad ee 2008, Golaha Gobolka wuxuu soo saaray toban talaabo si loo kiciyo baahida gudaha, taas oo maalgalisay lacago aad u fara badan oo lagu dardar galinayo hal abuurnimada madaxbanaan iyo hagaajinta qaabdhismeedka, taageerida dhismaha warshadaha farsamada sare iyo horumarka tikniyoolajiyada warshadaha. , iyo taageerida horumarinta warshadaha adeegga; Dhismaha kaabayaasha waaweyn sida jidadka waaweyn iyo garoomada diyaaradaha, iyo sidoo kale dhismaha tiro khadad rakaab ah oo u heellan, mashaariicda marinka dhuxusha iyo jidadka tareenada galbeedka, hagaajinta isku xidhka wadada, diyaarinta dhismaha garoomada diyaaradaha ee bartamaha iyo galbeedka iyo garoomada laamaha. , iwm, si weyn u yareynaya saameynta gudaha Sababtoo ah saameynta suuqa amniga, warshadaha RFID ayaa sidoo kale soo kordhiyay fursado ganacsi oo badan; isla mudadaas qaybaha kale ee laxiriira, oo dib loogulaabanayo suuqa hantida guryaha dhamaadka bisha Maarso 2009, baahida loo qabo nidaamyada kaararka xakamaynta marinka ee dhinacyada kaladuwan sida amniga dhismaha caqliga, bulshada dhijitaalka ah, iyo isbitaalada Sababta ugu weyn ee lagu gaarayo koboca degdega ah ayaa ah in dhismaha ugu dambeeya ee Shiinaha uu sidoo kale siinayo aasaaska ugu adag horumarka xasiloon ee suuqa amniga.
Marka la adeegsanayo xakamaynta helitaanka bulshada caqli-gal ah, is-dhexgalka koontaroolayaasha guryaha ee caqliga leh iyo nidaamka is-dhexgalka dhismaha ayaa la isku darayaa si loo xakameeyo qalabka guryaha (nalka, qaboojiyaha, TV-ga, maqalka, qaboojiyaha, iwm.) Iyada oo loo marayo shabakadda. Markaa isticmaal nidaamka kaarka xakamaynta helitaanka caqliga, oo ay weheliso alaarmiga ka hortagga tuugada si aad u xaqiijiso maareynta qalabka digniinta ee hubayn iyo hub ka dhigis, iyo codsi aqoonsi aqoonsi oo ah xakamaynta isku xirnaanta CCTV si loo xaqiijiyo xalka maaraynta amniga ee caqliga badan. U cusbooneysii shaqada maaraynta maaraynta marin u helka maamulka isku dhafka maaraynta marin u helka amniga (oo ay ku jiraan xakamaynta marin u helka, digniinta, roondeynta, baarkinka gawaarida, wiishka, isku xirka CCTV, isku xirnaanta DVR, isdhexgalka qalabka biometric, adeegga OPC, naqshadeynta kaararka iyo daabacaadda, Maareynta shirkado badan , laba bas iyo shaqooyin kale oo taxane ah) iyo maaraynta kaararka maareynta helitaanka ayaa hubaal ah inay dhalan doonaan suuq cusub oo lagu xakameynayo marin u helka.
Xianglong waxay bixisaa noocyo badan oo kala duwan badhanka bir & caag ah loo adeegsaday nidaamyada xakamaynta marin u helka. Horumarinta 14 sano ', waxaan si deg deg ah ugu habeyn karnaa keypads-yada kala duwan ee aan caadiga ahayn Qaadashada siinta loo helo furayaasha warshadaha ee la isku halleyn karo, ee xasaasiga ah waa himiladayada shirkadeena, waxaan diirada saareynaa inaan noqono hogaamiyaha caalamiga ah ee keydka warshadaha iyo taleefannada gacanta ee isgaarsiinta!
Faahfaahin dheeri ah. ku soo dhawow inaad noo soo dirto email ama wax ka weydiiso www.yyxlong.com. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan kuguuleysano mashaariic adiga!
Hore: Adeegso APP si aad u xaqiijiso da'da inaad biir uga iibsato mashiinnada iibinta dhammaadka-2021
Xiga: Xianglong A16 PTT Handsets Loogu Adeegsaday Poland Mashruuca Nidaamka Isgaarsiinta Isgaarsiinta Kala Duwan